Xirfado dhaqameed Jabaan ah | Safarka Absolut
Susana Maria Urbano Mateos | | La cusboonaysiiyay 12/07/2018 17:35 | Japan
Waxay yiraahdaan gudaha Japan, caadooyinka ugu casrisan iyo kuwa qadiimiga ahi waxay isugu yimaadaan isku dheelitirnaan dhammaystiran, Aniguna waxaan u maleynayaa inay tahay sababta oo ah runtu waxay tahay inay tahay dal muhaajiriin u ah qof kasta oo reer galbeed ah, oo leh baaq aamusnaan ah, iyo macaanida la ina siiyay ee farshaxanimadeedu ku muujisay jilicsanaanta dhoobada, macbudyadeeda, naqshadeynta iyo xardhideeda, sarraynta dharkeeda, iyo jilicsanaanta qaababka muuqaalka farshaxankeeda badan iyo kuwii hore.
Maqaalkan waxaan kaaga sheegi doonaa qaar ka mid ah tibaaxaha farshaxanimada ee taariikhda oo dhan ka dhacay Japan, halkaas oo hal abuur kasta oo farshaxan ahi leeyahay dareen falsafad qoto dheer oo dhab ah. Qaar badan oo ka mid ah farsamooyinkan soo jireenka ah ayaa luntay, kuwa kalena warshado ayaa la sameeyay, xubnahoodiina meel walba ayaa lagu iibiyaa.
1 Bizen dhoobada
2 Boorsada Japan
3 Hakata caruusadaha
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan, aqoonsiga iyo dhoobada hore ee Japan waa dhoobada Bizen, inaad isla markiiba ku kala garan doonto adkaysigeeda birta u eg, bunni guduudan, oo aan lahayn dhaldhalaal, inkasta oo hadii ay jiraan raad dambas la shubay ay u ekaan karto dhaldhalaal iyo astaamaha ka dhasha dabka foornada qoryaha.
Farsamada gacanta Bizen, oo qaabab badan leh, waxaa loo soo saaraa si tartiib tartiib ah, muddo dheer. Dabka qoryaha waa in lagu hayaa heerkul sarreeya 10 ilaa 14 maalmood oo ku lug leh saacado dhaadheer iyo tanno alwaax ah, sidaas darteed rasaastu waxay dhacdaa oo keliya hal mar ama laba jeer sanadkii.
Macaanidaas iyo quruxdaas Boorsada Jabbaan waxay asal ahaan ka timid qarnigii XNUMXaadMarkii hore, ma jirin wax la mid ah, waxayna ka timid gacanta farsamayaqaannada Kuuriya oo yimid gobolka qadiimiga ah ee Hizen ee jasiiradda Kyūshū, waxayna ka amba baxeen Yurub dekedda Imari, waana sababta loogu yaqaan soosaar imari. Ilaa dhammaadkii qarnigaas, jasiiradda Japan waxaa lagu sameeyay oo keliya aaggan, laakiin waa dhammaadkii qarnigii toddoba iyo tobnaad oo ay bilaabatay in laga soo saaro Kyoto iyo magaalooyin kale.
Nooc kale oo ka mid ah galleyda ayaa ah kakiemon, oo leh qurxinta polychrome, waxaa hindisay Sakaida Kakiemon (1595-1666). Qaar ka mid ah astaamaha qaybaha waa derbiyadooda aadka u khafiifka ah, saldhigooda aadka u cad iyo tayada layaabka leh ee dhaldhalaalka midabada leh.
Astaamo aad uwanaagsan ayaa ah dhoobada Kutani, oo leh taariikh dahabi ah iyo shantiisa midab: jaalle, cagaar, casaan, buluug iyo guduud, iyo madow, oo ka tarjumaya quruxda dabeecadda, inta badanna ubaxyada iyo shimbiraha.
Dhoobada ama dhoobada nabeshima waxay la mid tahay kaamil ahaanshaha tayada sare ee qalabka la isticmaalay iyo farsamadiisa gaarka ah.
Boorsada loo yaqaan 'Satsuma porcelain' waxaa lagu gartaa muraayad dhalaal leh, leh midabbo polychrome ah oo lagu qurxiyay dahab. Waxaa loo kala saaray laba qaybood oo ballaadhan, qaabka buluug iyo caddaan ah, oo lagu qurxiyay muraayadda hoosteeda; iyo qaabka loo yaqaan 'polychrome', oo leh rasaas dheeraad ah si loo hagaajiyo midabada kale, dhalaalka.
Dolls-yada waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha Jabaan, dhab ahaan, Hinamatsuri waa loo dabaaldegaa, xaflad caruusadaha ah, oo la xusaayey ilaa waqtiyadii hore. Tani waa xaflad dhaqameed ka kooban labisidda caruusadaha dharka Heian Era, ka hor intaan lagu tuurin webiga si ay uga takhalusaan gabdhaha jinniyo shar leh, laakiin hadda caruusadaha ayaa looga tagay iyagoo dul jooga meel allabari.
Waxaa jira noocyo badan oo shax ah laakiin laga yaabee reer galbeedka kuwa ugu caansan waa Hakata ninyo, Doob dhoobo Jabbaan ah oo ka yimid aagga magaalada Fukuoka. Waxaa jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah iyadoo loo eegayo mawduucooda: tiyaatarka dhaqanka ee Jabaan, quruxda dumarka, samurai, iwm. Caruusadahaani waxay ahaayeen xusuustii ay askarta mareykanka qaateen inta badan kadib qabsashadii Jabaan, sidaa darteed waxay noqdeen kuwa caan ah, sikastaba asal ahaan waxay kasoo bilaabatay qarnigii XNUMXaad.
Yonaguni-orimono waa magaca guud ee dharka lagu soo saaro jasiiradda Yonaguni-jima, koonfur-galbeed jasiiradaha Japan. Tan iyo 1987-dii waxaa loo tixgeliyaa ganacsi dhaqameed ay dowladdu aqoonsan tahay.
In kasta oo ay run tahay in waqtiga oo dhan qaababka iyo midabada dharka noocan ahi ay is beddeleen, ubaxyada yaryar ee leh qaababka casaanka iyo jaallaha ah iyo maryaha xariijimaha ah ayaa weli ah.
Farsamo ayaa jirta Shibori, oo ah magaca loo bixiyay Jabbaan farsamada dheehidda gunti.
Kimono waa dharka hidaha iyo dhaqanka Japan ee ragga iyo dumarkaba, taas oo ahayd dharka sida caadiga ah loo isticmaalo ilaa sannadihii ugu horreeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib. Kimonos oo lagu sameeyay farsamooyin dhaqameed iyo qalab wanaagsan waxaa loo tixgeliyaa shaqooyin farshaxan oo sax ah.
Kimono sameynta ayaa isbadashay ilaa qarnigii XNUMXaad, markii dhadhanka xariirku bilaabay inuu noqdo mid ka dhex muuqda samurai iyo baayacmushtariyaasha Qalabaynta tayada sare leh ee ay soo saareen farsamayaqaannada waxaa lagu gartaa isticmaalka badan ee dahabka iyo qalinka loogu talagalay ubaxyada iyo naqshadaha shimbiraha, iyo qorshooyinka joomatari dhaqameed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Xirfadaha dhaqameed ee Jabaan
Jasiiradda sixirka ah ee San Juan de Gaztelugatxe
7 meelood oo adduunka ah oo u muuqda meeraha kale